Ukujikeleza Ikhamera: Inkqubo yeDolly ye-iPhone yakho okanye iDSLR | Martech Zone
Ukujikeleza ikhamera: Inkqubo yeDolly kwi-iPhone yakho okanye kwiDSLR
NgoLwesibini, Agasti 6, 2013 NgoMvulo, Agasti 5, 2013 Douglas Karr
Sibhale malunga izixhobo ezisisiseko zokurekhoda ividiyo lonke ishishini kufuneka libenalo ukuba banqwenela ukurekhoda iividiyo ezisemgangathweni kwishishini labo. Ukuba ukhe wabukela ividiyo ekumgangatho we studio, nangona kunjalo, uqaphele umkhondo kunye neenkqubo zedolly abazisebenzisayo ukubonelela ngeefoto ezizodwa, ezigudileyo.
Nge $ 99, ngoku unokuba nayo Hlaziya inkqubo yekhamera yeDolly kwi-DSLR yakho okanye i-139 yeedola, i-smartphone yakho. Nalu uphononongo olukhulu lwemveliso kunye nohlobo lwezithonga oya kuba nakho ukuzenza. Banezincedisi ezimbalwa-nokuba nenkqubo yomkhondo onokongeza kuyo!
Ngokutsho Jikelezisa ikhamera indawo:
Ikhamera eguqukayo yedolly liqonga lokufaka imifanekiso yevidiyo egudileyo nenamandla. Le nkqubo inokwenza iindidi ezahlukeneyo zokulandela umkhondo kunye neefoto ezijikelezayo zedolly kunye nexesha elinamandla lokuphelelwa kunye nokuyeka ukufota. Iyahambelana nayo nayiphi na ikhamera, kwaye ilungele ukusetyenziswa kuyo yonke imiphezulu nakweyiphi na indawo.
Ii-asi ezinokuhlengahlengiswa zivumela idolly ukuba ihambe kumgca othe ngqo, okanye kwi-arc ejikelezayo yayo nayiphi na i-engile. Inkqubo ibandakanya ikhithi kaloliwe evumela ukuba idolly isetyenziswe nakweyiphi na indawo ukufumana ividiyo egudileyo nakwindawo embi. Yongeza eyakho imibhobho / iintonga ukwenza umkhondo wesilayidi wobuphi na ubude! Ikhampasi nganye yomgaqo kaloliwe ifakiwe ukuze yamkele intaba yokuhamba kathathu ukuze ukwazi ukusebenzisa iileyili nakuphi na ukuphakama, okanye wenze ukuthambeka okanye ukuncipha kwemifanekiso eshukumayo.
Ikhalenda yokuthengisa nge-imeyile ngo-2013
Ngaba ishishini lakho kufuneka libe kwiPinterest?